कसले बनाए कस्तो योजना ? « Pahilo News
कसले बनाए कस्तो योजना ?
प्रकाशित मिति : 1 January, 2017 11:40 am
आज सन् २०१७ को पहिलो दिन । बितेको वर्ष राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अनेक घटनाहरु भए । तर, नयाँ वर्ष भने पुराना घटनाहरुबाट पाठ सिक्ने र नयाँ योजना सँगालेर अगाडि बढ्ने अवसर हो । सबैले नयाँ वर्षलाई त्यही अवसरका रुपमा ग्रहण गर्ने गर्छन् ।
बितेको वर्ष नेपाली साहित्य, संगीत, चित्रकारिता आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरु भए । नयाँ–नयाँ पुस्तक, संगीत र कलासिर्जनाहरु देखिए । लोकगायक बमबहादुर कार्कीले केही नयाँ गीतमा काम गरे भने लोकगायक कमलीकान्त भेटवालले केही जिल्ला घुमेर लोकभाका संकलन गर्न रुचाए । कथाकार राजेन्द्र पराजुलीले भने ‘शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा’ नामक कथाकृति ल्याए भने कलाकारद्वय लालकाजी लामा र विजय महर्जनले नयाँ सिर्जनाहरुमा नै जोड दिए । भिन्नभिन्न क्षेत्रका यी पाँच सर्जकहरुले आगामी वर्ष कस्तो योजना बनाएका छन् त ?
बमबहादुर कार्की, लोकगायक
देशको अन्य क्षेत्रमा के कस्तो प्रगति भयो भन्ने कुरा राजनीतिले नै प्रभाव पारेको हुन्छ । राजनीति नै राम्रो भएन भने अन्य कुरा सपिँ्रदैन । संगीतको कुरा गर्ने हो भने बितेको वर्ष राम्रै प्रगति भएको मान्नु पर्छ । समय सापेक्ष संगीतमा राम्रै प्रगति भएको मान्नु पर्छ । तर, केही विकृतिहरु पनि साथमै आएका छन् ।
खासमा म नयाँ वर्षको योजना नेपाली क्यालेन्डरअनुसार नै बनाउने गर्छु । तर पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई अनुसरण गरेर भन्नुपर्दा पुराना गीतहरुलाई प्राथकिताका साथ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने योजनामा छु । नयाँ गीतहरुमा हराएको कालजयीपन फेरि ल्याउन प्रयत्नशील रहने छु ।
राजेन्द्र पराजुली, कथाकार
म आशावादी मान्छे हुँ । समग्रमा भन्नुपर्दा सन् २०१६ राम्रै रह्यो । नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति भएका छन् । मलाई नेपाली साहित्यले फड्को मारेको अनुभुति भएको छ । तर, नेपाली साहित्यमा जति गहनता हुनुपर्ने हो, त्यो अझै पनि हुन नसकेको अनुभूति हुन्छ ।
निश्चय नै सन् २०१७ बढि नै राम्रो हुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु । नेपाली साहित्यलाई गहकिलो बनाउन कडा मिहिनेतको खाँचो छ । म पनि एक लेखकको हैसियतले मिहिनेत गर्ने तयारीमा छु । व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म यो वर्ष राजनीतिक कथावस्तुमा आधारित कथा लेख्ने योजनामा छु । र, एउटा उपन्यास लेख्न पनि थाल्दै छु तर यहि वर्ष पूरा हुन्छ या हुँदैन, थाहा छैन । यसबाहेक दैनिक काम त छँदैछ ।
कमलीकान्त भेटवाल, लोकगायक
बितेको वर्ष मैले देशका केही जिल्लामा पुगेर ५÷७ वटा मौलिक भाका संकलन गरेर ल्याएको छु । खोटाङ, दोलखा, सोलुखुम्बु र अछामलगायतका जिल्लाहरुमा पुगेर त्यहाँका मौलिक लोकभाका संकलन गरेँ । अब सन् २०१७ मा संकलन गरेर ल्याएका ती लोकभाकाहरुलाई रेकर्ड गराउने सोचमा छु ।
सम्भवतः चैत÷वैशाखसम्ममा ती गीतहरु रेकर्ड गर्ने छु । त्यसका लागि म्युजिक नेपालमा कुरा भइसकेको छ । अब निस्कने मेरो पाँचौ गीति एलबम हो । मैले यो एलबमलाई व्यावसायिक रुपमा भन्दा पनि लोकभाकाको संरक्षण गर्ने हेतुले ल्याउन लागेको हुँ । किनकि हामीले अहिले मौलिक लोकभाकाको संरक्षण गरेनौं भने आगामी पुस्ताले ती भाका सुन्न पाउने छैनन् ।
लालकाजी लामा, कलाकार
म आशावादी मान्छे हुँ । सन् २०१६ सबै कुरामा उपलब्धिमूलक नै रह्यो । केही योजना पूरा भए, केही बाँकी नै छन् । बाँकी रहेका कुराहरु नयाँ वर्ष पूरा होलान् ।
सन २०१७ को लागि अहिले नै योजना बनाइसकेको छुइनँ । तर, तयारी भइरहेको छ । विगतमा अलि अव्यवस्थित भएर बसेँ, धेरैजसो बाहिरकै काममा लागेँ । तर यो वर्षदेखि पेन्टिङ र मूर्तिको काममा केन्द्रित हुने योजना छ । नयाँ कामको दौरानमा अलि फराकिलो खालको स्टुडियो बनाउने योजना बनाइरहेको छु ।
मेरा लागि सन् २०१६ राम्रो नै भयो । आफूले देखेका अधिकांश सपना पूरा भएका छन् । केही रहेका कामहरु पूरा गर्नु छ । एक सफल मूर्तिकार बन्ने सपना थियो, त्यो पूरा भयो । यो नै मेरा लागि खुसीको कुरा हो ।
नयाँ वर्षमा नेपालमा मूर्तिहरु ठूलो रुपमा उत्पादन गर्ने योजनामा रहेको छु । ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका मूर्ति तयार पार्ने र नेपाली मूर्तिहरुलाई विश्व बजारमा पु¥याउने लक्ष्य छ । अर्को कुरा, नयाँ वर्षमा व्यावसायिक रुपमा चीनको भ्रमण गर्ने योजना पनि छ ।